Man United oo garoonkeeda Old Trafford kaga adkaatay kooxda Tottenham Hotspur…+SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Manchester) 05 Dis 2019. Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford kaga adkaatay kooxda Tottenham Hotspur uu hogaaminayay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, kaddib markii ay ku dubteen 2-1, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Manchester United iyo Tottenham Hotspur.
Daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta kooxda Manchester United ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay xiddiga reer England ee Marcus Rashford.
Laakiin daqiiqadii 39-aad kooxda Tottenham Hotspur ayaa heshay goolka barbaraha waxaana ciyaarta 1-1 ka dhigay Dele Alli.
Daqiiqadii 49-aad kooxda Manchester United ayaa heshay rigoorre waxaana gool u badelay Marcus Rashford, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 2-1 oo ay kooxda Manchester United kaga adkaatay Jose Mourinho iyo wiilashiisa Tottenham Hotspur oo marti ku ahaayeen garoonka Old Trafford.